प्रधानमन्त्री सपना देखाउने, मुख्यमन्त्री नाच्ने ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
आफूसँग दुई तिहाइ हुनेले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, प्रदेश ३ सरकारको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । विकास, योजना, समृद्धि र सुख नारामात्र भएको छ । काम हुन सकेको छैन ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना देखाउने यता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल दाइले बोल्ने । यहाँ यस्तै भइरहेको छ । काम गर्ने शैली दुई दाइको ठयाम्मै उस्तै छ । कुरा ठूला–ठूला गर्ने काम केही नगर्ने ।
बाहिर प्रदेश २ सरकारले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश गएको छ, तर त्यस्तो सन्देश प्रदेश प्रदेश ३ सरकारको हकमा गएको छैन । प्रदेश ३ मा सुरु सुरुमा काम छिटो–छिटो भएको थियो । चाँडै प्रदेश सभाको बैठक गर्ने, चाँडै सरकार बनाउने, सभामुख तोक्ने काम पनि प्रदेश ३ मा अरु प्रदेशभन्दा छिटो भएको थियो । तर, अहिले प्रदेश ३ सरकार दिनदिनै पछि पर्दैछ । हरेक सवालमा पछि धकेलिँदै छ । प्रदेश नामाकरण, राजधानी तोक्ने मात्र होइन, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउने विषयमा पनि प्रदेश सरकार ढिलो भएको छ । पहिले देखिएको अब्बलपन अहिले पछि हट्दैछ । यस्तो देखिएको छ कि कामको हिसाबमा प्रदेश ३ सरकार सात वटा प्रदेशमध्ये साताैं नम्बरमा पर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको कामलाई छिटो छरितो बनाउन र काम गर्ने तौरतरिका फेर्न हामीले बेला –बेलामा सुझाव दिने गरेका छांै । जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका हामीले निभाएका छौं । तर, प्रदेश ३ सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन ।
मुलकमा तीन तहका सरकार भए पनि जनताको काम हुन सकेको छैन । जनताको घरदैलोमा सरकार भन्ने नारा छ । एउटा सरकारले नहेरे, अर्को सरकारले हेर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, त्यस्तो महसुस जनतालाई छैन । केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार छ । प्रदेश ३ मा दुई तिहाईभन्दा पनि बढी छ । ११० सदस्यीय प्रदेश ३ प्रदेश संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति ८१ छ । जब कि दुई तिहाइ पुग्न ७४ जना भए पुग्छ । कांग्रेसका सांसद २१ जना मात्र छन् । अरु साना दलको उपस्थिति ६/७ जना मात्र छ । यति ठूलो संँख्या हुँदाहुँदै प्रदेश ३ सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ?
प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला समूह (फर्म) हरुलाई कृषिमा काम गर्न भनी करोडौं रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । एकैपटक करोडौं अनुदान दिँदा त्यसमा भ्रष्ट्राचार हुन सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता ठूला व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण (सफ्ट लोन) दिनुपर्ने हो । अनुदान त दुई/चारवटा बाख्रा भएका, दुई/चारवटा राँगा, अलिकति तरकारी खेती गर्ने, कुुखुरा पालन गर्ने जस्ता साना–साना किसानहरुलाई दिनुपर्ने हो । तर, प्रदेश ३ सरकारले ठूला–ठूला व्यवसायीलाई मात्र अनुदान दिएको छ । त्यस्तो अनुदान लाखौंमा होइन, करोडौंमा छ । यो राम्रो चलन होइन । ठूला व्यावसायीलाई सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ, करोडांैको अनुदान होइन ।
राजनीतिप्रधानमन्त्री सपना देखाउने, मुख्यमन्त्री नाच्ने !